Fitaovana handraketana ny birao | Avy amin'ny Linux
Isaky ny te-hanao "tutorial" amin'ny zavatra rehetra isika, ny fahafahan'ny "firaketana" dia tonga ao an-tsainao ny mampakatra azy any amin'ny YouTube na iray amin'ireo tranonkala malaza indrindra. Amin'izany fomba izany, ny zavatra tianay hazavaina dia ho takatra mora kokoa ary, ho fanampin'izany, dia mora kokoa ny manazava toy izay raha mila manoratra tsikelikely isika.
Ny programa kely fantatra hahavita an'io asa io dia RecordMyDesktop, fa hiresaka fitaovana hafa koa izahay. Hanomboka ve isika?
-RecordMyDesktop: Ny fampiasana azy dia tena tsotra ary mamela ny firaketana ny birao amin'ny endrika .ogv (Ogg video). Ny kalitao vokatr'izany dia tena tsara.
Mametraka azy fotsiny:
sudo apt-mahazo mametraka gtk-recordmydesktop recordmydesktop
Fanamarihana: Ry mpampiasa Kde: Mampiasà qt-recordmydesktop fa tsy gtk-recordmydesktop
Bebe kokoa ao amin'ny: http://recordmydesktop.sourceforge.net
-XVidCap: Ity rindrambaiko ity dia ahafahanao mametra ny faritra fandraisam-peo ao amin'ny biraonao sy mamindra azy na manova ny habeny amin'ny fotoana rehetra mandritra ny fandraisam-peo. Ny endrika famoahana dia .mpeg na .avi
Ny fametrahana azy dia ampiasainay:
sudo apt-mahazo mametraka xvidcap
Bebe kokoa ao amin'ny: http://xvidcap.sourceforge.net/
Istanbul: io dia mitovy amin'ny RecordMyDesktop raha manana safidy mitovy amin'izany. Izy io dia azo jerena amin'ny fizarana maro ary mety ampiasaina. Manohana azy mivantana i Gnome, na dia azo atao aza ny mampiasa azy amin'ny KDE na XFCE.
sudo apt-mahazo mametraka istanbul
Mpampiasa Fedora nanamarika:
sudo yum -y hametraka istanbul
Bebe kokoa amin'ny: http://live.gnome.org/Istanbul
-Wink: Ny fahazoan-dàlana dia Freeware fa ilaina amin'ny fampandrosoana dia ilaina ny mangataka alalana amin'ny mpanoratra azy. Noho izany, manokana ny licence-nao. Na eo aza izany dia hitantsika amin'ny fizarana maro izany. Ity dia rindrambaiko tena tsara izay maka snapshot isaky ny elanelam-potoana ary avy eo dia mamela anao hanova ny baikony ary manampy anototra. Mahatonga azy ho tsara ho an'ny torolàlana na boky torolàlana.
sudo apt-mahazo mametraka wink
Bebe kokoa amin'ny: http://www.debugmode.com/wink/
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Fitaovana hanoratana ny biraonao
Benjamin Que Puc dia hoy izy:
Valiny tamin'i Benjamin Que Puc
Martin Algañaraz dia hoy izy:
Compilation tsara, misaotra nizara azy 🙂
Valiny tamin'i Martin algañaraz
LuisGamerr dia hoy izy:
Misaotra betsaka tamin'ny anjara birikinao, nanampy betsaka ahy izany
Valiny tamin'i LuisGamerr
Misy lahatahiry ilaina ao Nautilus